March 28, 2018 March 28, 2018 အားဖြင့် CBDOlieVoordelen.nl
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးခြောက်တရားဝင်သည်အဘယ်မှာရှိအနောက်တိုင်းနိုင်ငံများတွင်အရေအတွက်ကြီးထွားဖို့ဆက်လက်. အခုမော်လ်တာ, ဆဲမြေထဲပင်လယ်အတွင်းတရားမျှတစွာရှေးရိုးစွဲကျွန်း, ဥပဒေပြုတရားမဝင်ထံမှဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးခြောက်ကြာသည့်မွေးစားသည်အဘယ်မှာရှိ! မော်လ်တာမှာ "ကုသမှုအစားထောင်ဒဏ် '- ဟောင်းတစ်ဦးကဗြိတိသျှကိုလိုနီ - နီးပါးအမြဲတမ်းကွန်ဆာဗေးတစ်ဖြစ်ကြသည် … ဆက်ဖတ်ရန်
Categories CBD Olie Nieuws, ဆေးဖက်ဝင်ဆေးခြောက်Tags avantages de la CBD, bijwerkingen chemotherapie, cbd legal belgique, cbd olie, နာတာရှည်နာကျင်မှု, malta, Marie-Louise Coleiro Preca, medicinale cannabis, mediwiet, multiple sclerose, spasticiteit, times of malta
ROOM တွင် Springer ပညာရှင် Hans Kamperman ဆေးဖက်ဝင်ဆေးခြောက်၏တရားဝင်မှုအတွက်တိုက်ခိုက်နေ
March 23, 2018 အားဖြင့် CBDOlieVoordelen.nl
နေမကောင်းမိခင်အိမ် Springer Hanskamp Erman ခုန်များ၏အိမ်၏မျက်နှာစုံညီခန်းမအတွင်းအများပြည်သူပြခန်းကနေဆေးဝါးကုသမှုဆေးခြောက်ရေနံကနေလူကိုကြာသပတေးနေ့မွန်းလွဲပိုင်းအကြိုးခံစားလှုပ်ရှားသူပညာရှင် Hans Kamperman Groenlo ဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါဟိဂ်ကနေသူချင်းစည်းရုံးလှုံ့ဆော် Darpan Kuik နှင့်အတူသူသည်အာရုံကိုတောင်းဆိုဖို့ပါလီမန်အဆောက်အဦးများ၏ရှေ့မှောက်၌နှစ်လတပ်ချ … ဆက်ဖတ်ရန်
Categories CBD Olie Nieuws, ဆေးဖက်ဝင်ဆေးခြောက်Tags ဆေးခြောက်, cannabisolie, cbd olie, DARPAN VAN KUIK, GROENLO, HANS KAMPERMAN, KAMERSPRINGER, LEGALISERING WIETTEELT, medicinale cannabis, TWEEDE KAMER SPRINGER, ဆေးခြောက် OIL, Suicide ကြိုးစားမှု Hans စခန်း ERMANLeaveacomment